Thola iqoqo le-GAP Spain ngaye | Amadoda aSitayela
Amadoda aSitayela | | imfashini
Ngokufika kwekwindla, isikhathi se- ukushintsha ikhabethe, kuhambisana namathrendi amasha ku imfashini ye-mens ekwindla-ebusika 2021-2022.
Ezindabeni eziphakanyiswa yifemu UNYAKA WE-GAP in yakhe iqoqo lamadoda, singathola ezinye zezitayela ezintsha ku- izingubo zamamens ukubheka izitayela zesilisa zale sizini entsha esanda kwethulwa.
1 Izingubo eziyinhloko nezindwangu
2 Imibala enemfashini kakhulu
Izingubo eziyinhloko nezindwangu
Mayelana nohlobo lwe izingubo nokwakheka, labo abanyathela kakhulu yilokhu okulandelayo:
I-Denim Ize namandla okuhlala futhi iyaqhubeka nokuba ngomunye wamathrendi afunwa kakhulu. Ungesabi ukuhlanganisa izingubo eziningana zama-denim komunye nomunye. Isibonelo, ama-jean anejakhethi ye-denim noma ihembe.
I-Los izingongolo wathungela, zombili ezinemikhono emide nezinemikhono emifushane, zethulwa njengobusha obuzonyathela kakhulu kule sizini. Inketho ephelele yokuhlanganisa ne-denim, i-corduroy noma ibhulukwe loboya.
I-Los amavesti ahlanganisiwe Ngesitayela esimsulwa sama-90s futhi banenye inkambiso okufanele bayicabangele.
I-Las amahembe ahloliwe namabhantshi abakaze bahambe. Isetshenziswe kahle njengehembe noma, ukhetha ukuyigqoka njengesikibha esingaphezulu, phezu kwesikibha esisobala, noma ngaphezulu kwejezi eboshiwe.
I-Los Amabhulukwe amaShayina Kuhlanganiswa nakho konke futhi okusinikeza amathuba amaningi lapho sakha izingubo zethu. Kusuka ezingutsheni zakudala ezinamabhuthi amaqakala noma izicathulo eziboshwe ngentambo, kuye ezingutsheni eziyingozi kakhulu, lapho singangeza khona amateki noma ibhuthi yezemidlalo, ukuze sinikeze umoya wezemidlalo.
I-Las amaswidi, ene-hood noma engenayo, futhi ihlanganiswe ikakhulukazi nama-chinos, ama-denim noma abagijimi.
Ungakhetha futhi ukufaka ifayili le- ikepisi yelogo, okuthile, okufanele uzifake engcupheni yokukufaka cishe kunoma yisiphi isitayela ofuna ukusinikeza okuhlukile futhi okukhethekile.
Imibala enemfashini kakhulu
Ngokuqondene nemibala, izinkinobho ezimbili eziyisisekelo okufanele uzicabangele ukufeza i- isitayela se-trendier kule sizini:
I-Los amajezi alukiweIlungele ukuzivikela emakhazeni, ayisafiki kuphela ngamathoni angathathi hlangothi afana nomhlophe, omnyama noma ompunga. Kepha, kule sizini, ukumiswa kwezingubo zokugqoka zamadoda kuzofaka nobungozi obuncane, kufaka phakathi ama-jumpers azo zonke izinhlobo. imibala ecace kakhudlwana, kumathoni we-monocolor.
I-Los imibala yethulwe njengephambili kule sizini kunjalo ikamela nokubomvu, kuyo yonke imibala yayo, kufaka phakathi i-garnet noma iwayini. Okuthile esikubonile kuziphakamiso zabaklami bezingubo zamadoda kuwo wonke ama-catwalk. Ilungele izingubo ezifana namabhulukwe, amajakhethi, amajazi noma amajakhethi okugqoka. Umbala wekamela akuwona umbala ofanelana nawo wonke umuntu, ngenxa yomthwalo wawo omkhulu wombala ofudumele. Qiniseka ukuthi ngumbala ofanelana nawe, ngaphandle kwalokho, kungcono ukhethe omunye umbala ozizwa uthandwa kakhulu ngawo.
Ngokuqondene ne umbala obomvu, ukhiye obalulekile wokuyihlanganisa ngaphandle kokukhanyisa kakhulu kungaba khetha ingubo ephelele ngamathoni angathathi hlangothi bese ufaka leyo ngubo ebomvu noma ye-vermilion esitayeleni. Kungaba ibhulukwe, ibhantshi noma ihembe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Thola iqoqo le-GAP Spain ngaye
Ukususwa kwezinwele zangasese zowesilisa